आज डलरको भाउ बढ्यो, युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको घट्यो
काठमाण्डौ । आज शुक्रबार अमेरिकी डलरको भाउ बढेको छ। यो दिन युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार विदेशी मुद्राहरुका लागि कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ बढेको हो भने युरो र पाउन्ड स्टेर्लिङको भाउ घटेको हो। आजको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर ११९.७५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२०.३५ रुपैयाँ रहेको छ। यो...
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको भाउ आज मंगलबार बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि मंगलबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर ११९.७३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२०.३३ रुपैयाँ रहेको छ। यो विनिमय दर हिजो सोमबारको तुलनामा ३३ पैसाले बढेको हो। हिजो सोमबार डलरको भाउ स्थिर रहेको थियो। हिजो प्रतिडलर खरिददर ११९.४० रुपैयाँ र बिक्रीदर १२०...
आजदेखि जुम्ल्याहा 'राम–लक्ष्मण' हात्तीको चित्रअंकित हजारका नयाँ नोट बजारमा
काठमाण्डौ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार (साउन ७ गते) बाट एक हजार रुपैयाँको नयाँ नोट चलनचल्तीमा ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघिको एउटा हात्तीको सट्टा ‘राम र लक्ष्मण’ भनी चनिने दुर्लभ जुम्ल्याहा हात्तीको चित्रअंकित नयाँ हजारको नोट चलनचल्तीमा ल्याएको हो। नयाँ नोटको आकार र रङ भने पुरानैजस्तो छ। राष्ट्र बैंकले संकेत नं....
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति भोलि शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने सम्भावना रहेको छ। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले मौद्रिक नीति तयार भएको जानकारी दिँदै भोलि सार्वजनिक हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका हुन्। राष्ट्र बैंकको आज साँझ बस्ने बोर्ड बैठकमा मौद्रिक नीति पेश गरिने र पास...
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको भाउ आज बिहीबार घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि बिहीबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर ११९.९४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२०.५४ रुपैयाँ कायम भएको छ। यो विनिमय दर प्रतिडलर ४३ पैसाले गिरावट आएको हो। लगातारको स्थिरतापछि डलरको भाउ हिजो बुधबार बढेको थियो। यो दिन डलरको भाउ ३६ पैसाले...
काठमाण्डौ । यो साताको सुरुआतदेखि स्थिर रहँदै आएको अमेरिकी डलरको भाउ आज बुधबार बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि बुधबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर १२०.३७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२०.९७ रुपैयाँ कायम भएको छ। डलरको भाउ बुधबार ३६ पैसाले बढेको हो। हिजो मंगलबार डलरको भाउ २ पैसाले घटेको थियो। यो दिन प्रतिडलर...
राष्ट्र बैंकद्वारा असारभरि बिदाका दिन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खोल्न निर्देशन
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राजस्व संकलनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा असार मसान्तसम्म सार्वजनिक बिदाका दिन पनि खुला राख्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले हिजो बिहीबार सूचना जारी गर्दै असार २७ गते शनिबार र त्यसपछि सार्वजनिक बिदा परेमा राजस्व बुझ्ने ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखा...
काठमाण्डौ । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा देखा परेको कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई पुनः जीवन दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ छलफलमा सहभागीले सरल व्याजदर, पुनःकर्जाको व्यवस्था र...
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको भाउमा लगातार गिरावट आउने थालेको छ। डलरको भाउ आज बुधबार पनि घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि बुधबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ ६० पैसाले घटेको हो। यो गिरावटसँगै बुधबार प्रतिडलर खरिददर १२०.७४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२१.३४ रुपैयाँ कायम भएको छ। डलरको भाउ हिजो मंगलबार पनि २६ पैसाले...
घट्यो डलरको भाउ, आजको दर कति ?
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरको विनिमय दर आज मंगलबार घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि मंगलबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ २६ पैसाले घटेको हो। यो गिरावटसँगै मंगलबार प्रतिडलर खरिददर १२१.३४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२१.९४ रुपैयाँ कायम भएको छ। डलरको भाउ हिजो सोमबार स्थिर रहँदै प्रतिडलर खरिददर १२१.६०...
डलरसामु कमजोर बन्दै नेपाली मुद्रा
काठमाण्डौ । कोरोना संकटबीच अमेरिकी डलर नेपाली मुद्राको तुलनामा बलियो बन्दै गएको छ। एकातिर कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्र ध्वस्त भइरहेकै बेला अर्कोतिर डलर शक्तिशाली बन्दै गएको छ। हिजो र आज नै गरी नेपाल मुद्राको तुलनामा ५९ पैसाले बढिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि बुधबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको...
राष्ट्रबैंकद्वारा भोलि शनिबार पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खोल्न निर्देशन
काठमाण्डौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोलि शनिबार पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पूर्णकालीन रुपमा खुला राख्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ३२ जेठसम्म शनिबार तथा सार्वजनिक बिदामा समेत शाखा कार्यालयहरु खोल्न निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख...
राष्ट्र बैंकले ल्यायो रु १५ लाखसम्मको पुनःकर्जा दिन सकिने प्रावधानसहितको पुनःकर्जा कार्यविधि, २०७७
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना, लघु र घरेलु साना उद्यमका लागि रु १५ लाखसम्मको पुनःकर्जा दिन सकिने प्रावधानसहितको पुनःकर्जा कार्यविधि, २०७७ ल्याएको छ । कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यून गर्दै उद्यम व्यवसायलाई प्रभावकारीरूपमा पुनः अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकले उक्त कार्यविधि...
यो साता डलरको भाउमा निकै उतारचढाव, आज फेरि बढ्यो
काठमाण्डौ । यो साता अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा निकै उतारचढाव देखिएको छ। उतारचढावकै बीच आज शनिबार फेरि डलरको भाउ बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि शनिबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ ५५ पैसाले बढेको हो। यो बढोत्तरीसँगै प्रतिडलर खरिददर १२१.२३ रुपैयाँ र बिक्रीददर १२१.८३ रुपैयाँ पुगेको छ। हिजो शुक्रबार...
डलरको भाउ घट्यो, आज कति छ दर ?
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको भाउ आज बुधबार घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार विदेशी मुद्राहरुका लागि कायम गरेको विनिमय दरअनुसार डलरको भाउ ४४ पैसाले घटेको हो। डलरको भाउ घटेसँगै बुधबार यसको विनिमय दर प्रतिडलर खरिददर १२०.७२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२१.३२ पैसा कायम भएको छ। डलरको भाउ हिजो मंगलबार प्रतिडलर खरिददर १२१.१६ रुपैयाँ र बिक्रीदर...